Sacuudiga oo raalligalin ka bixiyay muuqaal la iskula simay u doodista xuquuqda haweenka iyo xagjirnimada - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaSacuudiga oo raalligalin ka bixiyay muuqaal la iskula simay u doodista xuquuqda haweenka iyo xagjirnimada
Sacuudiga oo raalligalin ka bixiyay muuqaal la iskula simay u doodista xuquuqda haweenka iyo xagjirnimada
Wasaaradda amniga qaranka ee Sacuudiga ayaa khalad dhacay ku tilmaantay muuqaal la isku barbar dhigay u doodista xuquuqda haweenka iyo xagjirnimada kaasoo lagu shaaciyay mid ka mid ah ciwaannadeeda baraha bulshada.
Muuqaalkaas ayaa lagu qeexay in u doodista xuquuqda dumarka ay lamid tahay ficillada xagjirnimada, waxaana dadka u dhashay waddankaas looga digay inay ku lug yeeshaan arrimo noocaas ah.
Sidoo kale waxaa lagu simay xiriirka gogosha ee dhex mara dadka isku jinsiga ah iyo diin la’aanta(fikirka aaminsan inuusan Ilaahba jirin).
Dhammaan fikradahaas ayey dowladdu ku qeexday kuwo aad halis u ah.
Wasaaradda amniga ayaa sheegtay inay hadda baaritaan ku waddo muuqaalkaas ay khaladka ku qeexday.
Sacuudiga ayaa waayadii dambe isku dayaya inuu wax ka baddalo wajiga looga bartay ee ah inuu ka mid yahay dalalka sida adag u xakameeya xuquuqda haweenka ee caalamka.
Muuqaalkan dunida ka yaabiyay oo kumbuyuutar lagu sameeyay ayaa dabayaaqadii isbuuca lasoo galiyay ciwaan ay leedahay laan ka tirsan waaxda amniga qaranka ee boqortooyada Sacuudiga. Laantan ayaa si toos ah u hoostagta boqorka dalkaas Salmaan Bin Cabdul-Casiis.
Bayaan ay soo saartay Wasaaradda ayaa lagu sheegay in muuqaalkaas ay ku jireen khaladaad badan, dadkii diyaariyayna aysan si wanaagsan u qabsanin shaqadooda.
Hay’adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Sacuudiga ayaa bayaan kale oo ay soo saartay ku sheegtay in difaacista xuquuqda dumarka aysan dambi ahayn.
Hase ahaatee, hay’addu ma aysan soo hadal qaadin xuquuqda dadka isku jinsiga ah ee xiriirka gogosha wadaaga iyo kuwa aan wax diin ah aaminsaneyn.
Sacuudiga ayaan lahayn sharci qoran oo lagu kala xadeeyo arrimaha ku saabsan xiriirka jinsiga iyo gogol dhaafka, balse garsooreyaasha maxkamadaha ayaa marka ay kiisaskaas soo gaaraan ku xalliya waxa ay ka qabto shareecada Islaamka, sida ay sheegtay hay’ad u doodda xuquuql insaanka oo fadhigeedu yahay Mareykanka.
Muuqaalka lagu shaaciyay Twitter-ka ayaa cambaareyn weyn kala kulmay hay’do ay ka mid tahay Amnesty International.
Heba Morayef, oo ah agaasimaha Amnesty International ee Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Africa ayaa tiri: “Ogeysiiskan wuxuu ahaa mid aad khatar u ah, wuxuuna saameyn halis badan ku leeyahay xuquuqda dhinaca hadalka iyo nolosha, sidoo kalena wuxuu saameynayaa amaanka waddanka”.
Wuxuu muuqaalkan kusoo aaday xilli ay boqortooyada Sacuudiga dadaal ugu jirto inay baddasho fikirkeeda dhinaca xuquuqda haweenka.
Sanadkii 2018-kii, dowladda ayaa meesha ka saartay go’aankii muddada dheer taagnaa ee dumarka looga mamnuucayay inay gawaarida kaxeeyaan.
Sidoo kale bishii August ee sanadkan ayaa wax laga baddalay arrimaha la xiriira in raggu ay mas’uul ka yihiin dhaqdhaqaaqyada haweenka.
Horay waxaa Sacuudiga loogu xiri jiray qof walba oo u istaaga inuu u doodo xuquuqda haweenka.
Somaliland: Ingiriiska Iyo Itoobiya Oo Magaalada Jigjiga Kaga Wada-hadlay Dhismaha Berbera Corridor
AKHRISO: Madaxweynaha DDS Oo Ka Hadlay Ururrada ONFL, Dulmi-diid, Doorashooyinka Iyo Arrimo Kale Oo Xaasaasi Ah